Mr. Karlo Pobre - Yangon Hotel Expo 2019
Managing Director (Colliers International | Myanmar)
Karlo has more than twelve years of experience in real estate and has spent years travelling in the region working with various Colliers offices such as Philippines, Singapore, Thailand and Hong Kong. As associate director, Karlo currently heads the research and advisory team in Myanmar and is responsible for winning new clients and expanding the business.
Karlo has advisedawide spectrum of major projects both in the Philippines and Myanmar including feasibility studies and development consultancy, highest and best-use studies, development recommendations and critiques, statistical forecasts, competitor and industry scans, consumer insight analyses, development conceptualization, and project marketing assessments. He covers all the major sectors including residential, commercial, retail, industrial, hotel and leisure markets.
Karlo is alsoaresource person in trainings and seminars in the Philippines and is sought after by major financial and property development institutions.
Since joining the Myanmar office in 2013, he has successfully completed several studies of various scales and complexities, as well as advised both local and foreign clients.
Karlo သည် အိမ်ခြံမြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းတွင် (၁၂) နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ပြီး Colliers ရုံးများရှိ သော ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ယိုးဒယားနှင့် ဟောင်ကောင် စသော နိုင်ငံများသို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရီးသွား လာပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် Karlo သည် တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ ရာထူးဖြင့် သုတေသန ပြုလုပ်ငန်းနှင့် အကြံပေး အသင်းအဖွဲ့ တွင် လုပ်ကိုင်နေပြီး Client အသစ်များနှင့် စီးပွားရေးတိုးချဲ့လာစေ ရန်အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည်။
Karlo သည် ဖိလစ်ပိုင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် –
အရေးပါသော စီမံကိန်းများ၏ ကျယ်ပြန့်သော နယ်ပယ်များ ဖြစ်သော အလားအလာရှိသော လေ့လာမှုနှင့် ဖွံဖြိုးရေး အကြံပေး၊
အမြင့်မားဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံး လေ့လာမှုနှင့် ဖွံဖြိုးရေး အကြုံပြုချက်များနှင့် ဝေဖန်ချက်များ၊ စာရင်းအင်းခန့်မှန်းချက်များ၊
ပြိုင်ဘက်များ နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း scans များ၊
သုံးစွဲသူ၏ အတွင်းသဘောထားကို ဆန်းစစ်ခြင်း၊
စီမံကိန်းဈေးကွက် အကဲဖြတ်ခြင်း တို့ကို အကြံပြုတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။
Karlo သည် အဓိကအရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍဖြစ်သည့် အိမ်ယာများ၊ စီးပွားရေးများ၊ လက်လီ ဖြန့်ချိမှုများ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေဈေးကွက်များ အားလုံးကို လွှမ်းမိုးထားသူလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Kralo သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် သင်တန်းများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး အဓိကဖြစ်သော ဘဏ္ဍရေးနှင့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အဖွဲ့အစည်း များတွင် အားစိုက်ကြိုးပမ်းနေသူ ဖြစ်ပါ သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရုံးကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး Karlo သည် များပြားသော နှုန်းထားနှင့် ခက်ခဲမှုများစွာကို အောင်မြင်စွာဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ Client များကို အကြံဉာဏ်များ ပေးခဲ့ပါသည်။